Congolese opposition leader, Moise Katumbi speaks at a three-day forum to delegates at a resort hotel near Johannesburg, South Africa, Monday, March 12, 2018. Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country. Associated Press
Moise Katumbi, Congolese opposition leader, speaks at a three-day forum, delegates at a resort hotel near Johannesburg, South Africa, Monday, March 12, 2018. Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country. Associated Press
Congolese opposition leader, Moise Katumbi, holds a document with his own face as he addresses a three-day forum of delegates at a resort hotel near Johannesburg, South Africa, Monday, March 12, 2018. Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country. Associated Press
Delegates listen as Moise Katumbi, Congolese opposition leader, speaks to delegates during a three-day forum, at a resort hotel near Johannesburg, South Africa, Monday, March 12, 2018. A top Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country. Associated Press
Congolese opposition supporters argue after their leader Moise Katumbi, addressed delegates at a three-day forum, at a resort hotel near Johannesburg, South Africa, Monday, March 12, 2018. A top Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country. Associated Press
Updated 3/12/2018 9:00 AM
MULDERSDRIFT, South Africa -- A top Congolese opposition leader and other figures opposed to longtime President Joseph Kabila met in South Africa on Monday to build a coalition ahead of long-delayed elections in the turbulent, resource-rich country.